Tag submissions - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » Tags » submissions
စက်တင်ဘာ 14, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ဇန်နဝါရီ 31, 2020 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB has sentaletter to DICA, the Myanmar Companies Registry, in response to their request for comments on disclosure of company information.
အောက်တိုဘာ 24, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
စက်တင်ဘာ 16, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၀-၂၀၂၄) ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့်မူကြမ်းအတွက် MCRB မှ မှတ်ချက်များပေးပို့ခဲ့
သြဂုတ် 16, 2019
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၀-၂၀၂၄) ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့်မူကြမ်း အတွက် MCRB မှ မှတ်ချက်များပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ 04, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော အခြား စီးပွားရေးနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့၊ေ
မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး တာဝန်ယူမှုရှိသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှုကို စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း MCRB ၏သဘောထားဖော်ထုတ်ခြင်း။
ဇန်နဝါရီ 10, 2019 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းလိုက်သော ပြင်ဆင်ထားသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကို အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စိုးရိမ် ကြောင်းဖော်ပြသည့် စာတစ်စောင် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှင့် မြန်မာဘာသာ)ကို MCRB က အမျိုးသားမြေအသုံး ချမှုကောင်စီ၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်န
အမျိုးသားလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) မှအကြံပြုချက်များ ပေးပို့ခြင်း
နိုဝင်ဘာ 13, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
အမျိုးသားလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသို့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၏ ဓာတုဓါတ်ကြွင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအား လျှော့ချခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာစိစစ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုလွှာ
မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ မူကြမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြု ဌာနက လွှတ်တော်သို့ အကြံပြုချက်များပေးပို့
သြဂုတ် 20, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနသည် ၁၉၄၈ခုနှစ် မြေသိမ်းဥပဒေအား အစားထိုးပြဌာန်းမည့် ဥပဒေသစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တ်ာကော်မတီများသို့ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် အကြံပြုချက်တစ်စောင် ပေးပို့ထားပါသည်။ အဆိုပါအကြံပြုချက်များသည် အမျိုးသားလွှတ်ေ
MCRB Proposes Amendments to the forthcoming Companies Regulations to Support Myanmar’s Implementation of Anti-Money-Laundering and EITI Requirements
မေ 30, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB has submitted proposed amendments to the 2018 Draft Companies Regulations on which the Directorate of Investment and Companies Administration (DICA) is currently seeking input to the Regulations and accompanying sample forms...
MCRB Submits Comments on the Draft Insolvency Law
MCRB has submitted comments on the draft Insolvency Law which is currently being prepared by DICA and open for consultation.
နိုဝင်ဘာ 03, 2017 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ဇွန် 26, 2017 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
NGOs Submit Further Comments on the Draft Myanmar Investment Rules
ဖေဖော်ဝါရီ 07, 2017 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB together with EarthRights International, Oxfam International, and the International Commission of Jurists, has submitted written comments on the ‘second tranche’ of the Draft Rules for the Myanmar Investment Law.
နိုဝင်ဘာ 29, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
အောက်တိုဘာ 03, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
စက်တင်ဘာ 29, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
Position Paper on ’Incentivising Shared Value’
စက်တင်ဘာ 22, 2016 in ရင်းမြစ်များ
The Australia-Myanmar Chamber of Commerce (AMCC) and the Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) launchedaPosition Paper on ‘Incentivising Shared Value’ at the Myanmar Business Roundtable of the Asian CSR Forum in Naypidaw on 19 September.
MCRB Encourages the US Government to Maintain Reporting Requirements for US Companies
စက်တင်ဘာ 15, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
On the eve of the visit of State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi to Washington, MCRB has written to US Secretary of State John Kerry to encourage the maintenance ofarequirement on US companies investing in oil and gas in Myanmar or more than US$5 millio
သတ္တုတွင်း ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အသုံးပြုရမည့် စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြံပေးဆွေးနွေးမှုအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) က ဆွေးနွေးမှုများပေးပို့
မတ် 07, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
သတ္တုတွင်းဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အသုံးပြုရမည့် စည်းမျဉ်းများ မူကြမ်းရေးဆွဲမှုအတွက် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) က ပေးပို့တင်ပြခဲ့သည်။
MCRB Responds to the Myanmar Government’s Consultation on Internet Gateway Services
ဇန်နဝါရီ 29, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB has provided input into the Government consultation on Internet gateway services, (Deadline 31 January) with comments focussed on the privacy aspects of the proposal.
US State Department Reporting Requirements for Responsible Investment in Burma
ဇန်နဝါရီ 25, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB has submitted comments recommending that the State Department maintains its requirement on US companies to report on investment in Burma (Myanmar), and has made some suggestions for improvement.
Caution Needed on the Proposed EU/Myanmar Investment Protection Agreement
ဒီဇင်ဘာ 18, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
Vicky Bowman spoke at the ‘Local Workshop on the EU-Myanmar Investment Protection Agreement: Impacts, Opportunities and Challenges’ in Yangon on 17 December.
Further Proposals from MCRB on the Draft Myanmar Investment Law
သြဂုတ် 04, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
Following on fromapublic consultation with civil society groups on the draft Myanmar Investment Law organised by the Department for Investment and Companies Administration (DICA) in May 2015, MCRB submitted further suggestions for incorporation.
ဇူလိုင် 30, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB has submitted comments on the draft Myanmar Telecommunications Master Plan covering issues such as transparency, universal access and service, data privacy and responsible business conduct.
ဇွန် 15, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မေ 18, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မတ် 30, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မတ် 23, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
မတ် 11, 2015 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (DICA) က http://dica.gov.mm.x-aas.net/ တွင် အကြံပြုချက် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်ကို MCRB က အကြံပြုချက်များ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ပွင်းလင်းမြင်သာမှုရှိသော အကြံပေးချက်များ လက်ခံခြင်းအစီအစဉ် အထူးသဖြင့် အများပြည်သူသို့ အနှ
မေ 21, 2014 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ